Tin Nyunt's Page - Myanmar Network
Tin Nyunt's Likes
Tin Nyunt's Friends
Tin Nyunt's Discussions
Started this discussion. Last reply by htaylim Aug 17, 2016.5Replies 18 Likes
အသံ၏ အန္တရာယ်များအသံထွက် (pronuncing) ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအင်္ဂလိပ်စကားမှာ အသံ ၄၄ သံရှိတယ်။ အခြားဘာသာစကားတွေမှာတော့ ၂၅ သံနဲ့ အသံ ၃၀ ကျော်ကျော် လောက်ပဲရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေဟာ အသံပိုင်းမှာ…Continue
Started this discussion. Last reply by htaylim Aug 17, 2016. 34 Replies 55 Likes
ရှောင်ရန်စကားလုံးများ၏ စွမ်းအားပုံမှန် သုံးနေကျမဟုတ်တဲ့ စကားတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ နေ့စဉ် ကျောင်း၊ လုပ်ငန်း၊ မိသားစုထဲမှာ ပုံမှန်ပြောဆို သုံးနှုန်းလေ့မရှိတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေကို ပြောတာပါ။…Continue
Started this discussion. Last reply by Htoo Aung Wint Mar 10, 2017. 25 Replies 81 Likes
စာတွေ (words) ဟာ အသံတွေ (sounds) နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ စာနဲ့အသံ ဆက်စပ်မှုကို မှန်ကန်အောင်မသုံးတတ်ရင် ဒုက္ခတွေ့တတ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ taboo လို့ခေါ်တဲ့ ရှောင်ရန်ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိတယ်။…Continue
Started this discussion. Last reply by Tinkoko Lynn Jan 17, 2014. 81 Replies 116 Likes
မူကြိုမှသည် ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ပညာလမ်းကြောင်းကို ပြန်လေ့လာကြည့်ရင် အလွန်ခက်ခဲ ပင်ပန်းတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ်ပညာရေးက မိဘရော၊ ကျောင်းသားပါ အေးအေးသက်သာနေရတဲ့ခေတ်မဟုတ် ပါဘူး။ ပညာဆိုတာကို မရ…Continue
Pink Ribbon From oonphyo
Tin Nyunt's Page
Tin Nyunt's Blog
Posted on August 4, 2012 at 9:38 28 Comments 80 Likes
Posted on July 11, 2011 at 14:19 46 Comments 48 Likes
Posted on July 2, 2011 at 11:00 46 Comments 46 Likes
Posted on July 1, 2011 at 11:217Comments 8 Likes
At 10:35 on October 22, 2013,
At 19:30 on April 25, 2012, Mg Kyaw Tint said…
Dear Sir, very nice to meet you. After i read your posts, i liked them. They were very good for me.
At 12:29 on February 10, 2012, Ivy Maia said…
Thanks for the friendship Sayar :) I hope i can getalot of knowledge from u :) thanks :)
At 12:19 on February 4, 2012, Theingi Soe said…
I amanew member. I hope we can share our knowledge on this platform.
At 14:35 on January 12, 2012, AYOOB AKHOON said…
am NEW N L D PARTY
i stay now yangon thingangyung t/s myanmar name aung naing brother sand mail i receive thank you.
welcome my party .
At 3:40pm on December 20, 2011, oonphyo gave Tin Nyuntagift…
At 15:13 on December 20, 2011, oonphyo said…
အစ်ကိုတင်တဲ့ IT အကြောင်းတွေက
At 21:30 on December 13, 2011, thankthowkoung said…
မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်းသူ့ ကို လေးစားပါတယ်။
Invite ပြန်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
At 13:03 on September 26, 2011, mee mee said…
thank u par shin
At 20:36 on August 24, 2011, မိဿမင်းသမီး said…
ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတာ ၀မ်းသာမိပါတယ်ဦး .... :)
ကျွန်မအခု စိတ်ပညာဌာနမှာ အသုံးချစိတ်ပညာ ထပ်တက်နေပါတယ် .....